Laptọọpụ dị ọnụ ala kacha mma - Anyị na-enyere gị aka ịchekwa
Laptọọpụ dị ọnụ ala kacha mma
Anyị na-atụnyere ma na-enyocha laptops dị ọnụ ala dịka njirimara akọwapụtara ka ị nwee ike ịchọta ihe kachasị mma na ịdịmma na ọnụahịa.
Azụmahịa taa na laptọọpụ dị ọnụ ala
Ịzụta otu n'ime laptọọpụ ndị dị ọnụ ala dị ka ịzụ ụgbọ ala. Ị ga-eme nyocha gị na ugboro itoolu n'ime iri ị ga-achọ "nye ya ntugharị" tupu i kpebie iburu ya n'ụlọ, n'ihi na ihe dị mma maka onye agbata obi gị nwere ike ọ gaghị adị gị mma. Tupu ị na-eche echiche banyere ụdị nke ị ga-achọ, ị kwesịrị ịtụle ọnụ ahịa ya na mmefu ego ị nwere..
Maka enyemaka gị, anyị emeela akụkụ kachasị ike nke ọrụ ahụ, na-achịkọta n'isiokwu a kacha mma ọnụ ala laptọọpụ. Anyị etinyela ihe nlere maka mkpa ọ bụla, yabụ n'agbanyeghị ihe ị ga-eji ya, ị ga-ahụrịrị nke kacha mma maka gị.
Ọ bụrụ na ịmabeghị nke laptọọpụ dị ọnụ ala ịchọrọ, n'okpuru ị nwere usoro ịzụrụ ihe ga-enyere gị aka ịhọrọ dabere na njirimara ị na-achọ:
Laptọọpụ dị ka ọnụ ahịa si dị
Laptọọpụ site na processor
Laptọọpụ site na ika
Laptọọpụ dị ka ihuenyo si dị
Laptọọpụ dịka ojiji ịchọrọ inye ya
Site na mmefu ego nke € 500 na € 1.000, ntụnyere a ga-enyere gị aka ịhọrọ dịka mkpa gị siri dị.
Ọ bụrụ na ị nweghị klas nke ị ga-azụta, anyị emeela gị otu ndu zuru oke yabụ ị nwere ike họrọ ihe laptọọpụ ịzụta site na ịpị njikọ ahụ.
Laptọọpụ kacha mma dị ọnụ ala nke 2021
Ọ dị mma, na-enweghị mmasị ọzọ, ka anyị bido na kọmpụta kacha mma dị ọnụ ala nke 2021. Iji mee ndepụta ahụ, ọ bụghị nanị na anyị eburu n'uche ọnụahịa, kamakwa imewe, nkọwa teknụzụ na ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ.
Akwụkwọ akụkọ CHUWI
Lelee nnukwu onyinye nke anyị chọtara ntakịrị n'okpuru n'ihi na ihe nlereanya a kwesịrị ịtụle, n'ihi nke a, anyị etinyela ya na mbụ. Ọ bụ akwụkwọ ndetu dị gịrịgịrị ma dị jụụ. Eleghị anya a na-eji ya dị ka laptọọpụ nke abụọ ma ọ bụ dị ka laptọọpụ ọrụ maka ụmụ akwụkwọ na ndị ọkachamara. Ị nweta ihe ị na-akwụ, yabụ na ị gaghị atụ anya ọsọ ọsọ ma ọ bụ ojiji. Agbanyeghị, n'agbanyeghị na ọ bụ laptọọpụ kacha ọnụ ala na ndepụta a, ọ nwere ụfọdụ ọmarịcha atụmatụ.
Ihe kacha adọrọ mmasị bụ 64 GB ya, nke a bụ nnukwu njirimara nke ọtụtụ laptọọpụ anyị tinyere na ndepụta a enweghị. I kwesiri iche echiche banyere CHUWI HeroBook dị ka azịza Microsoft nye Chromebook. Ọ bụrụ na ị naghị emekọrịta ihe na sistemụ arụmọrụ Chrome ma ejiri ya mee ihe Windows 10, nke a bụ otu n'ime laptọọpụ kacha mma dị ọnụ ala sitere na Microsoft.
Kọmputa a ọ ga-adabara nke ukwuu maka ojiji dị ọkụ kwa ụbọchị: sọgharị na ịntanetị, jiri Microsoft Office (dị ka Okwu na Excel), jikwaa na melite netwọkụ mmekọrịta, jiri ọrụ vidiyo na-enuba…)
Ọ bụ otu n'ime laptọọpụ ndị dị ọnụ ala na ndepụta a, mana nke ahụ apụtaghị na ọ dịghị ike. Maka iji kwa ụbọchị ọ ga-enye gị a ogologo ndụ batrị, nhazi ngwa ngwa Na ị nwere ike ọbụna igwu egwuregwu vidiyo dị mfe (maka mgbagwoju anya ọ na-adaba ma ọ bụrụ na ị na-achọ laptọọpụ maka nwatakịrị, nke a bụ nhọrọ dị mma, tụkwasị m obi).
Na ahụmịhe anyị, Ihe ndọghachi azụ nke laptọọpụ a bụ na ọ nweghị draịva DVD. Agbanyeghị, nke a na-aghọ ụkpụrụ maka kọmpụta na oke ọnụ ahịa a, yabụ ekwela ka nke a wepụ gị, ebe enwere ike zụta ọtụtụ sọftụwia ị ga-achọ, dị ka Microsoft Office, dị ka nbudata. , enweghị diski. Agbanyeghị, ọ bụrụ na nke a bụ ihe na-adịghị mma maka gị, ị nwere ike họrọ ịzụta mbanye DVD mpụga maka ihe na-erughị euro 30.
E wezụga nke ahụ, n'ihi nnukwu nha ihuenyo ya, àgwà ya na njirimara ndị e kwuru n'elu, Nke a bụ nnukwu laptọọpụ maka mmefu ego siri ike.
Asus VivoBook nwere ike otu n'ime laptọọpụ kacha mma dị ọnụ ala maka ojiji kwa ụbọchị na ndepụta a. Ọ ghọọla onye na-ere ahịa na Amazon, ma e jiri ya tụnyere laptọọpụ ndị ọzọ na ọnụahịa ya, anyị nwere ike ịhụ ihe kpatara ya ngwa ngwa.
ASUS VivoBook 15…
Atụmatụ ndị anyị chịkọtara na ndepụta gara aga bụ ihe kwesịrị ekwesị maka laptọọpụ ala niile, yabụ kedu ihe mere ọ pụrụ iche? Ọ dị mma, Asus họọrọ ịnye uru na-enweghị atụ maka ego yana ihe ngosi HD Igwe eserese ejikọtara ọnụ Intel Intel Graphics 620 na v2 Dolby Advanced Audio ka ị nwee ike ile TV ma ọ bụ ihe nkiri nwere àgwà niile ị tụrụ anya ya.
Nke a bụ ụdị laptọọpụ ahụ Ị nwere ike iji ma maka ọrụ na multimedia. Ọ bụ ezie na ọ bụghị nke kasị nta ma ọ bụ nke kasị ibu, ọ ka dị nnọọ mfe isi n'ụlọ gaa n'èzí nakwa site n'èzí gaa n'ụlọ, na-arụ ọrụ na ya Windows 10, ikiri ihe nkiri na telivishọn ma ọ bụ ọbụna na-egwu mfe video egwuregwu. Maka ihe ọ na-efu, ana m akwado na ọ bụ otu n'ime kọmpụta kacha mma na ọnụahịa a dị n'ahịa.
Laptọọpụ a dị ọnụ ala karịa ndị ọzọ akwadoro, mana anyị ekpebiela itinye ya na agbanyeghị n'ihi na na ntuziaka laptọọpụ mmefu ego ndị ọzọ o meela ka ọ bụrụ ọkwa kacha elu, ọbụlagodi ọkwa mbụ na ndepụta PC Advisor nke kọmpụta kacha mma dị ọnụ ala nke 2021. Ya mere, ọ bara uru ịkwụ ụgwọ ego ahụ ma ọ bụ na ọ bara uru na ihe nlereanya a?
Anyị etinyela HP 14 na ndepụta anyị nke kacha mma laptọọpụ enyi na enyi nke 2021 n'ihi na ọ nwere ike were ihe ọ bụla ị tụbara ya (ma e wezụga brik) na ntakịrị ihe.
Ọ na-efe ngwa ngwa site na ngwa ọrụ niile dị mkpa dị ka Microsoft Office, ihe nchọgharị weebụ n'ozuzu, ọrụ vidiyo na-enuba na ọbụna na-enye gị ohere ịme egwuregwu vidiyo (ọ bụ ezie na anyị agaghị echefu na e mebere ya maka nke ahụ, ọ dị ntakịrị nwayọ na ndịna-emeputa bụ nke ọkara-ala mma).
Maka ihe a niile, anyị na-atụle ya otu n'ime kọmpụta kacha mma na oke ọnụ ahịa ya, ebe ị nwere ike nweta ya ihe na-erughị 300 euro.
Ọnụnọ nke Lenovo Ideapad na ndepụta a bụ ihe ijuanya. Akwụkwọ ndetu a nwere Ihuenyo mmetụ rotary LED, Full HD (1920 x 1080). Nke a pụtara na ị nwere ike itinye ya na ọnọdụ nlele ma ọ bụrụ na ịchọrọ ikiri vidiyo YouTube ma ọ bụ ihe nkiri ọ bụla nke ọma.
Ọ bụ ya nwere processor kacha mma na ndepụta, yabụ na ọ bụ nhọrọ dị oke mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịrụ ọrụ dị mma ma nwee ọmarịcha laptọọpụ 2-in-1.
Lenovo Yoga dị ntakịrị ọkụ karịa laptọọpụ ndị ọzọ, mana ọ ka enweghị ike dakọtara na Chromebook anyị na-enyocha n'okpuru n'akụkụ ahụ. Ọ dị ike karịa kọmpụta ndị anyị kọwara na paragraf ndị gara aga na, n'agbanyeghị na ihuenyo mpịachi nwere ike iyi ka ọ bụ ihe arụrụ arụ, a na-ekwu na ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na bụrụ imetụ aka. Isi ihe nlereanya a nwere otu ojiji dị ka Packard Bell EasyNote, mana nwere ụfọdụ njiri mara elu.
Laptọọpụ kacha mma dị ọnụ ala dịka ojiji ha siri dị
Maka ọrụ ndị bụ isi:
15,6 "HD ihuenyo 1366x768 pikselụ
AMD A6-9225 Processor, DualCore 2.6GHz ruo 3GHz, 1MB
Ọgbọ nke asaa INTEL CORE.I5 DUAL-CORE ProCESSOR
Ihuenyo RETINA na-egbuke egbuke
INTEL IRIS PLUS eserese640 eserese
Ultra-light, na-atụ naanị 1340 g yana ndụ batrị ya ruru awa 19.5, LG gram bụ laptọọpụ 17 ″ kacha ewu ewu…
Windows 10 Home Edition (64bit RS3) maka ịrụ ọrụ dị nro
Ebe nchekwa na-agbasawanye, 512 GB SSD dị ka ọkọlọtọ nwere oghere mgbakwunye iji gbasaa ruo 2 TB; Ebe nchekwa 8 GB nke RAM nwere ...
12.3-anụ ọhịa ihuenyo mmetụ (2736x1824 pikselụ)
2 na 1:
14 "ihuenyo, FullHD 1920x1080 pikselụ IPS
AMD Ryzen 5 2500U Processor, Quadcore 2.5GHz ruo 3.4GHz
Ndụmọdụ tupu ịzụrụ
Mgbe ntuziaka izugbe maka kọmpụta ọnụahịa kacha mma, ị nwere ike ịmasị ihe akọwapụtara nke ọma. N'okwu a, ị gaghị echegbu onwe gị, anyị nwere ọtụtụ ntụnyere ga-amasịkwa gị.
Ọnụahịa kacha mma laptọọpụ. Ntụle dị ntakịrị karịa ike ọgwụgwụ na-atụnyere nke ọma nke ọma na ọnụahịa nke ụdị ụfọdụ. Iji tụlee ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta ego kachasị mma na ego gị.
Laptọọpụ egwuregwu. Maka ndị ọrụ ahụ chọrọ ịzụrụ laptọọpụ ka ha gwuo egwuregwu. Anyị ahọpụtala ndị na-eme ihe kacha mma na nkọwapụta yana ọnụahịa ka ị nwee ike nweta ihe kacha mma na eserese na arụmọrụ.
Ụdị laptọọpụ kacha mma. Ị ga-ahụ na ụdị niile agụnyere ebe a mara ya mere ha abụghị ndị China. Ị nwere ike ịhụ ntụnyere zuru oke ma ọ bụrụ na ịchọrọ ozi ka mma na nke a. Anyị na-enye ọhụụ zuru oke nke bụ ụdị nke ị nwere ike ịtụkwasị obi. Ha bụ otu ihe anyị na-atụnyere na ibe anyị ọnụ ala laptọọpụ.
Na nnukwu mbata nke Windows 10, laptọọpụ na-arị elu ọzọ. Mana nke a abụghị naanị ihe kpatara ihe ịga nke ọma a, na mgbakwunye, mgbasawanye nke Ultrabooks na mmụba nke ngwakọ abụọ n'ime otu na-eje ozi dị ka laptọọpụ na dịka mbadamba emetụtawo. Laptọọpụ dị ọnụ ala na-enweta ala karịa akwụkwọ Chrome maka ụdị dịka HP Pavilion x2. Ka ọ dị ugbu a, laptọọpụ ndị nwere ikike zuru oke igwu egwuregwu na-ahụkwa mmetụta ha na-eto ma ọ dị ka ọ ga-adị mfe iji dochie anya kọmputa desktọpụ anyị.
Ebe ọtụtụ nhọrọ dị, ịhọrọ laptọọpụ kacha mma maka mkpa gị na-esiwanye ikeỌ bụ ya mere o ji dị mkpa na, nke mbụ, ị ga-ekpebi ihe ị ga-eji ya mee.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhọrọ ngwa ngwa na ngwa ngwa na laptọọpụ nke kacha mma maka mkpa gị, anyị na-akwado ya lee anya na ibe weebụ a.
Ndị ọrụ ahụ na-agbaso oge buut ngwa ngwa na kọmpụta dị arọ n'ihi na ha chọrọ iji ya mee njem ga-enwe obi ụtọ na Ultrabook.. Ndị na-egwu egwuregwu, n'aka nke ọzọ, ga-ahọrọ maka laptọọpụ ndị na-eme ka ọ dị mma maka eserese na mkpa nhazi ha, na ndị chọrọ ngwaọrụ na-enye mgbanwe, ga-ahọrọ maka ngwakọ abụọ n'ime otu.
Na mbụ, ọ nwere ike iyi ihe siri ike - yana nhọrọ ndị ahụ niile - mana ebumnuche anyị bụ inyere gị aka ịchọta laptọọpụ kacha mma n'agbanyeghị mkpa gị. Kwere anyị mgbe anyị gwara gị na e nwere laptọọpụ zuru oke maka gị. Site na ntuziaka a, ị gaghị achọta ya, mana ị ga-ejide n'aka 100% nke ịzụrụ gị.
Ntụle laptọọpụ: nsonaazụ ikpeazụ
Nyocha ndị anyị mere dugara anyị ịhọrọ ndị mmeri atọ n'ime kọmpụta 10 nyocharaNdị a bụ ụdị atọ anyị gụnyere na ntụnyere laptọọpụ a.
El mbụ nkewa, Onye meriri ihe nrite ọla edo, bụ HP anyaụfụ x360 de 13,3 sentimita. Nke a na laptọọpụ nwere ike Intel Core i7 processor na 256GB nke SSD - expandable ka 512 GB -. Na mgbakwunye, ọ na-arụ ọrụ na Windows 10, nwere ikike nke ruru awa 9 na nkeji 28 ma tụọ naanị kilogram 1,3. Ihuenyo ya dị oke mma, yana mkpebi sitere na 1920 x 1080 pikselụ na ruo 2560 x 1440 na ngagharị.
HP anyaụfụ x360 13-ar0000ns ...
Ọ bụ ezie na nha 13,3-inch enweghị ihuenyo kachasị na ahịa, mana ọ na-eme ya site na mbugharị ya. HP Specter x360 nwere ọdụ ụgbọ mmiri USB 3.0 atọ na-enye gị ohere ịnweta ngwa ngwa USB niile. Laptọọpụ a dakọtara na kaadị SD na HDMI. Onye nrụpụta na-enye ekwentị ịntanetị, nkata na ọrụ teknụzụ, yana mgbasa ozi ọha.
El Nkewa nke abụọ na onye meriri ihe nrite Silver bụ usoro Akwụkwọ Dell Inspiron 5570 de 15 sentimita. Ọsọ ọsọ nke akwụkwọ ndetu a dị mma, 3,1Ghz, dị ka isi processor ya, Intel Core i3, ọ na-enye gị nzaghachi ngwa ngwa. Ihe mara mma nke ukwuu maka laptọọpụ a bụ na ị nwere ike ịkwalite kaadị eserese na kaadị vidiyo AMD ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji eserese nkọwa dị elu rụọ ọrụ. Ike nchekwa 1.000 GB ya na draịvụ ike zuru oke ma nye gị ohere dị ukwuu maka faịlụ mgbasa ozi gị.
DELL EMC 7 V75G 39,62 cm
Sistemụ arụmọrụ, Windows 10, na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ nwere batrị na-adịte aka nke ruru awa 5 na nkeji 45, eziokwu bụ na akụkụ a nwere ike imeziwanye ya. Inspiron 5570 dị ntakịrị arọ karịa onye mmeri anyị, 2.2 kg, nke a, n'otu akụkụ, bụ n'ihi ihuenyo inch 15. Dị ka HP Envy X360, mgbe anyị doro Inspiron maka ule ọkụ, ala ya ruru ogo 37.7 nke, dịka anyị tụlerela, enweghị ahụ iru ala ma ọ bụrụ na ijide ya n'apata gị. Mkpebi ihuenyo bụ isi bụ 1920 x 1080 pikselụ, mana ị nwere ike kwalite ya na mkpebi dị elu, 3840 x 2160 - ma ọ bụ ihe bụ otu, a Ihe ngosi 4K. Ọ nwere ọdụ ụgbọ mmiri USB 3.0 abụọ yana otu ọdụ ụgbọ mmiri USB 2.0.
N'ikpeazụ, nke ebe atọ na onye meriri ihe nrite Bronze bụ Acer Swift 5 de 14 sentimita. Ihe nlereanya a nwere ọsọ nhazi nke 3,4GHz, buru ibu maka laptọọpụ na ụdị a. Na ya n'ozuzu rating nke A-, anyị arụmọrụ data na-egosi na processor bụghị ihe na-edebe a PC na nke atọ ebe. Ihe nlereanya bụ isi nwere 256GB SSD na sistemụ arụmọrụ ya bụ Windows 10.
Ogologo ndụ batrị ya bụ awa 7 na nkeji 36, nke dị n'okpuru nkezi maka laptọọpụ anyị nyochara. Mkpebi ihuenyo bụ isi bụ 1920 x 1080 pikselụ, mana enwere ike ịkwalite ya na 2560 x 1440. Ọzọkwa, Acer Aspire Swift nwere ọdụ ụgbọ mmiri USB 3.0 abụọ na otu ọdụ ụgbọ USB 2.0.
Ntụnyere bụ nke ụdị ndị a ma ama, ya mere ụdị ọnụ ahịa ihe ruru € 1.000. Ọ bụrụ na ị nwere a tighter mmefu ego, ịhụ anyị ntụnyere nke Laptọọpụ ọnụ ahịa dị mma ma ọ bụ nke anyị Nyocha laptọọpụ dị ọnụ ala ịchọta nke dị ọnụ ala.
Ụdị nke Laptọọpụ
Iji mechaa na ntụnyere laptọọpụ anyị, anyị ga-akọwa ihe ụdị laptọọpụ dị iche iche bụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbasa akụkụ nke ọ bụla ntakịrị karịa ebe anyị nwere akụkọ metụtara.
Dị ka ọ dị na nnukwu ịzụrụ ihe ọ bụla, mgbe ị na-eche echiche inweta laptọọpụ ruo mgbe euro ikpeazụ gụchara. Ọ bụ ngwaọrụ ga-adịru afọ ole na ole, yabụ anyị na-akwado ka ị lelee ntuziaka anyị na kọmpụta kacha mma tupu ịme mkpebi ọ bụla.
Afọ ole na ole gara aga enwere naanị laptọọpụ na laptọọpụ na-arụ ọrụ. Taa, kama, ọtụtụ nhọrọ maka ụdị ọ bụla. Ka anyị malite na ihe ndị bụ isi:
Laptọọpụ ndị a bụ isi ngwaọrụ nke ga-ezute ụfọdụ njirimara nke mkpa, ọkụ, ike na nha nke Intel processor hibere, na mbọ iji nyere ndị na-eme laptọọpụ Windows na-eguzosi ike n'ihe aka na-asọ mpi MacBook Air inch 13 nke Apple.
Ka e wee zụọ laptọọpụ Ultrabook dị ka nke a, ọ ga-emezurịrị nkọwa siri ike nke Intel wepụtara. Ọ ga-adị gịrịgịrị, ọ nweghị ike ịdị oke (mgbe emechiri ya) karịa 20 mm maka ihuenyo inch 13.3 ma ọ bụ 23 mm maka 14-inch ma ọ bụ ihuenyo buru ibu. Na mgbakwunye, ọ kwesịrị ịnwe ndụ batrị nke awa isii ma ọ bụrụ na ị na-egwu vidiyo dị elu ma ọ bụ itoolu ma ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ.
Lee anya na ntụnyere ultrabooks dị ọnụ ala ihe anyi nwere.
Ọ nweghị ike iwe ihe karịrị sekọnd atọ maka Ultrabook ka ọ pụta na nzuzo. Laptọọpụ ndị a na-enwekarị draịva siri ike na njirimara dị ka iwu olu na ihuenyo mmetụ. Emebere Ultrabooks site na ibugharị na ịrụ ọrụ n'uche, mana a na-akwụ ya ọnụ ya dị elu, na-amalite na $900.
Ihe si na ya pụta bụ ụfọdụ Laptọọpụ kachasị mma nke na-enweghị ihe ọ bụla ga-enwe anyaụfụ maka laptọọpụ Apple kacha mma. Ultrabooks bụ laptọọpụ gburugburu 2 centimeters gbara ọkpụrụkpụ, nwere ogologo ndụ batrị yana ngosipụta dị nkọ, dị ka Dell XPS 13 ma ọ bụ Asus Zenbook.
Lenovo Yoga (2021) abụghị naanị laptọọpụ dị gịrịgịrị na nke dị mfe, ọ bụ ya bụ nnọọ mgbanwe na imewe larịị. Ịkwanye ihuenyo 13,9-inch na etiti inch 11 abụghị obere ọrụ, mana Lenovo arụwokwa ọrụ ebube nke ịmepụta ihe nleba anya na-enweghị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njedebe. Yoga 910 bụkwa kọmpụta dị ike nke ukwuu nke nwere ọnụ ahịa akwadoro nke ukwuu. Maka ihe a niile, anyị na-ewere ya na ọ bụ Ultrabook kacha mma.
Laptọọpụ maka egwuregwu
Laptọọpụ egwuregwu bụ kpọmkwem ihe ị chere - PC maka ndị na-akwado egwuregwu vidiyo n'ezie. Na nkenke, a naghị eji ha egwuri egwu Candy Crush ma ọ bụ Angry Birds, kama igwu egwuregwu PC dị arọ nke chọrọ ihe nrụpụta dị elu, 8GB ruo 16GB nke RAM, opekempe 1 TB nke nchekwa na kaadị eserese. nke bụ njirimara kachasị mkpa. Laptọọpụ maka ịgba chaa chaa na-adịkarị square ma ihe owuwu ha siri ike karịa kọmpụta ndị ọzọ, na ihuenyo ha na-adịkarị elu.
Ị nwere ike ịhụ anyị nyocha nke kacha mma egwuregwu laptọọpụ.
Laptọọpụ maka egwuregwu ha ekwesịghị ịdị gịrịgịrị ma ọ bụ dị mfe, ebe ọ bụ na ndị egwuregwu na-ejikarị ha eme ihe kama iji kọmputa desktọpụ. Laptọọpụ egwuregwu na-enye gị ohere ịme otu egwuregwu dị ka kọmpụta desktọpụ, mana n'ihi na ọ nwere ike ibugharị ya iji si n'otu ọnụ ụlọ gaa n'ọzọ ma ọ bụ igwu egwu n'ụlọ enyi.
N'oge na-adịbeghị anya, laptọọpụ ndị na-egwu egwuregwu enweela ọganihu dị egwu na-agbalị ịchọta ndị otu desktọọpụ ha. N'echiche a, ọ dị ka nkwubi okwu ezi uche dị na ya maka evolushọn a bụ ịmalite gụnyere iberibe desktọpụ na laptọọpụ egwuregwu. Ihe nlereanya a bụ a Laptọọpụ inch 15,6 dị ike na-enweghị atụ, nwere ihe nrụpụta desktọpụ zuru oke yana GPU mkpanaka kachasị elu. dị. Ị nwere ike iche na nchikota a ga-eme nnukwu laptọọpụ, mana nke a na-achịkwa ịkwanye ya niile n'ime ahụ dị obere.
Laptọọpụ maka ụmụ akwụkwọ na ọrụ
Laptọọpụ azụmahịa yiri kọmpụta ebumnuche izugbe ọdịnala a tụlere n'isiokwu ndị ọzọ, mana ha dị ewuru ka elu mma, ha components na-na-na-adịgide adịgide na n'ozuzu na-ere na ogologo na keukwu akwụkwọ ikike. I kwesịghị iji dochie laptọọpụ gị maka azụmahịa kwa afọ ole na ole n'ihi na oge agwụla.
N'oge a anyị na-akwado na akwụkwọ ndetu ndu.
A na-emepụta ụdị kọmpụta ndị a site n'uche ọrụ ha, yana ndị na-arụ ọrụ quad-core nke nwere ike ijikwa ọtụtụ ọrụ dị mgbagwoju anya n'otu oge ebe ọ bụ na ị ga-enwe ike ịme ngwa ngwa niile dị mkpa iji rụọ ọrụ gị, na-enweghị kọmputa na-ebelata. Laptọọpụ ndị a n'ozuzu enweghị nnukwu kaadị eserese, mana enwere ike ịgbakwunye ha ma ọ bụrụ na ọrụ gị gụnyere eserese ma ọ bụ ndezi vidiyo.
The HP Pavilion 14-ce2014ns nwere ike n'ọtụtụ ụzọ dị ka MacBook Air, ma ọ bụ igwe ka mma n'ọtụtụ ụzọ. Ọ dị gịrịgịrị, dị ọkụ, yana n'ụzọ mara mma karịa maka ahụ aluminom ya. Na mgbakwunye, laptọọpụ a nwekwara a Ngosipụta HD zuru oke dị elu, Intel Core i7 CPU na 1TB nke nchekwa HDD dị ka nhọrọ. Agbanyeghị, ihe kachasị ịtụnanya bụ na ị nwere ike nweta ihe a niile maka ihe dịka euro 800, nke na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime kọmpụta kacha mma ma ọ bụrụ na ị nwere mmefu ego ụmụ akwụkwọ.
Emebere ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị maka ọrụ, yabụ aha ha. akwụkwọ ndetu ndị a n'ozuzu oke nwere naanị otu ihe n'uche: nrụpụta. Ndị na-ere ahịa na-akwado nkeji ndị a na GPU ndị ọkachamara, dị ka usoro Nvidia Quadro ma ọ bụ ahịrị AMD FirePro.
Ihe ndị ọzọ e ji mara ya bụ a ọdụ ụgbọ mmiri dị iche iche na ohere dị mfe na internals karịa laptọọpụ ntụrụndụ ndị ọzọ. Ọ bụghị ikwupụta ntinye ihe nketa ndị ọzọ, dị ka TrackPoint cursors, yana nhọrọ nchekwa ọkwa ngwaike, dị ka nyocha akara mkpịsị aka. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike ịkpọ Lenovo ThinkPad X1 Carbon na HP ZBook 14.
Lenovo Ideapad 330, ekele maka ịchọ mma ya na-adịte aka na nke na-adịgide adịgide, nke siri ike, ọ mara mma nke ukwuu ihe niile ị chọrọ site a mobile worktation. Na mgbakwunye, ọ na-enye ndị ọkachamara nnukwu mkpebi ihuenyo, ogologo ndụ batrị, yana arụmọrụ siri ike, ntụkwasị obi.
N'iburu n'uche na ọ na-efu site na euro 900, ọ bara uru ịkwụ ụgwọ ahụ maka ihe ọ bụla ọ na-enye ndị ọkachamara na-arụ ọrụ n'èzí ụlọ ọrụ.
Laptọọpụ abụọ na otu (ngwakọ)
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-ejikọta ojiji nke laptọọpụ na nke mbadamba, ọ ga-abụ na ngwakọ ngwaọrụ bụ mma maka gị. Ejiri sistemu eji arụ ọrụ abụọ, nke Microsoft Windows 8 kwadoroNgwa ndị a nwere ike ịbụ n'ụdị mbadamba nkume nke enwere ike itinye ngwa na ya ka ọ rụọ ọrụ dị ka laptọọpụ, ma ọ bụ ha nwere ike ịbụ n'ụdị laptọọpụ na-ewere ụdị mbadamba mgbe ewepụrụ ya na keyboard. Ị nwere ike ịhụ ebe a ntụnyere anyị Akwụkwọ ndetu 2-na-1 nwere ike ịgbanwe ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ụdị ndị a.
N'ezie, echiche bụ ịnye ngwaọrụ nke nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma ma dịka mbadamba ma dịka laptọọpụ, ka ọ ghara inwe ọtụtụ ngwa n'akụkụ ụlọ. Iwebata ngwaọrụ ndị a n'ahịa adịghị mfe, mana ihe atụ na-egbukepụ egbukepụ nke ike ha bụ Microsoft's Surface Pro 3.
HP Specter x360 13 abụghị naanị ngwaọrụ kachasị dị ịtụnanya na nke sitere na ika HP ruo taa, ọ bụ ya. Laptọọpụ ngwakọ kacha adọrọ mmasị na ahịa. Mgbe ọtụtụ afọ nke mmezigharị gasịrị, mbadamba ihe ngwakọ ọhụrụ a sitere na HP enwetala ọmarịcha ọmarịcha ọmarịcha, dị ka ihuenyo buru ibu ma ọ bụ mkpebi dị elu. Na mgbakwunye, emezigharịrị ụfọdụ obere ihe ndị dị ka hinge ma ọ bụ ụdị mkpuchi, iji mee ka Specter HP kwụsie ike ma dị mfe iji.
Ị ga-amata laptọọpụ egwuregwu ozugbo ị hụrụ ya: nnukwu nha, ọkụ na-egbuke egbuke, eserese na-egbuke egbuke, na ndị na-egwu egwu. Ọbụlagodi na N'ihi ọdịdị dị gịrịgịrị, dị ọkụ na ụdị ndị mara mma, dị ka Razer Blade ma ọ bụ MSI GS60 Ghost Pro, ụkpụrụ a na-amalite ịgbanwe..
Ntinye aka a njikọ Ị nwere ntụnyere zuru oke na laptọọpụ iji kpọọ (ịgba chaa chaa).
N'ikwu okwu n'ozuzu, laptọọpụ egwuregwu bụ Ejiri GPUs mkpanaka kacha ọhụrụ sitere na Nvidia na AMD inwe ike igwu egwuregwu kacha ọhụrụ yana ọ bụrụ na ị na-eji kọmputa desktọpụ egwu egwu (Enwere ụdị ụfọdụ nwere ike dochie kọmputa desktọpụ ozugbo).
Laptọọpụ ebumnuche izugbe
Ụdị laptọọpụ ikpeazụ a siri ike ịhazi. Ha bụ igwe ndị ka na-agbaso ụkpụrụ edobere ọtụtụ iri afọ gara aga nke ihe kwesịrị ịbụ laptọọpụ, n'agbanyeghị na a nụchara anụcha. N'iburu n'uche ihe niile ahịa laptop nyere n'onwe ya. a na-ewerekarị ndị nọ n'ụdị a dị ka kọmputa dị ọnụ ala ma ọ bụ n'etiti.
Laptọọpụ ndị a nwere nha ihuenyo site na sentimita 11 ruo 17 na n'ozuzu ha enweghị ọtụtụ atụmatụ na-apụta n'okpuru mkpuchi plastik ha na-ejikarị. Ha bụ kọmputa nwee ike ịrụ ọrụ kwa ụbọchị mana ha na-ada ada mgbe ị nwere mkpa ndị ọzọ na-achọsi ike. Ekwenyere m nke ahụ ihe omuma a Ọ ga-enyere gị aka ntakịrị ịhụ ihe niile na eserese.
N'afọ 2014, MacBook Pro inch 13 bụ kọmpụta kacha mma Apple wepụtara. Ụdị 2021 na-adị ngwa ngwa ma na-enye ogologo ndụ batrị. Wezụga mmelite ime, 2021 13-inch MacBook Pro eketala Force Touch trackpad ọhụrụ ewepụtara. Ikekwe Apple anaghị apụ apụ maka ngwa azụmahịa ya, mana ịnweta Mac na-adọrọ mmasị nke ukwuu ma ọ bụrụ na i buru n'uche ngwanrọ ọ na-enye na mmelite ya.
Akwụkwọ Chrome bụ otu n'ime kọmpụta kacha nta na nke dị mfe na ahịaMana ha enweghị ike na nchekwa nke akwụkwọ ndetu ọdịnala. Kama sistemụ arụmọrụ Windows ma ọ bụ Macintosh, Chromebooks na-agba ọsọ na Chrome OS Google, emebere ya maka ịchọgharị ịntanetị yana obere ihe ndị ọzọ. Dịka, draịvụ ike ha dị obere - gburugburu 16GB - ihuenyo na-abụkarị inch 11, ha na-enwekarị naanị otu ọdụ ụgbọ mmiri USB.
Anyị nwere ntụle ntụnyere zuru oke nke Chromebooks dị ka obere laptọọpụ kacha mma.
Otú ọ dị, ha na-enye gị ohere ịchekwa foto, vidiyo na akwụkwọ ndị ọzọ na Google Drive kama na draịvụ ike gị.. Mkpebi ihuenyo ya na-abụkarị 1366 x 768 pikselụ, nke zuru oke iji sọfụ na ịntanetị wee lelee ihe nkiri site n'oge ruo n'oge. Ọzọkwa, ị nwere ike ijikọ otu eriri USB mgbe niile ka iwelie njikọ.
Nsonaazụ bụ sistemụ nwere ike ịgba ọsọ na ngwaike dị ala, na-eme Chromebooks ezigbo maka mmefu ego siri ike ma ọ bụ maka ụmụ akwụkwọ. N'ezie, Chromebooks na-arụ ọrụ kacha mma na ebe enwere ịntanetị ikuku, mana Google na-akwalite ọrụ ya na-anọghị n'ịntanetị n'oge na-adịbeghị anya. Iji nweta echiche nke ha, ị nwere ike lelee Dell Chromebook 11 ma ọ bụ Toshiba Chromebook.
Netbooks yiri akwụkwọ Chrome n'ihi na ha dị obere, dị ọnụ ala, yana ahaziri maka nchọgharị weebụ yana obere ihe ndị ọzọ. Kọmputa akwụkwọ ndetu ndị a enweghị draịva anya iji kpọọ DVD na CD. Ka o sina dị, N'adịghị ka Chromebooks, netbooks na-agba ọsọ na sistemụ arụmọrụ Windows, ma obu nke ikpeazu ma ọ bụ na mbụ, nke ọtụtụ ndị ọrụ maara nke ọma.
Ị nwere ike pịa ebe a ka ịhụ kacha mma ọnụ ala netbooks.
Ọzọkwa, ọtụtụ netbooks, nwere ihuenyo mmetụ aka na ahụigodo ha nwere ike ịpụpụ, dị n'ókè n'etiti laptọọpụ na mbadamba. Netbook bụ nnukwu laptọọpụ maka ndị na-amasị iji ngwa egwuri egwu, mana na-ahọrọ iji ahụigodo anụ ahụ pịnye.
Kamma obere ka ọ bụ nnukwu?
Kedu ụdị ha, laptọọpụ Ha na-abụkarị sentimita 11-17 n'ogo. Mkpebi gị gbasara ụdị laptọọpụ ị ga-azụta kwesịrị ịdabere n'ihe abụọ a: ịdị arọ na nha ihuenyo.
Nke mbụ, nha ihuenyo laptọọpụ gị na-egosi kpọmkwem ọnụọgụ ọdịnaya ọ nwere ike igosipụta yana nha ya, n'ezie. Agbanyeghị, ịkwesịrị iburu n'uche na, Ka nha ihuenyo na-abawanye, mkpebi ahụ kwesịkwara ịbawanye. Ị gaghị anabata ihe ọ bụla na-erughị mkpebi nke 1366 x 768 maka laptọọpụ 10 ruo 13-inch, ma ọ bụ 1920 x 1080 maka laptọọpụ 17 ruo 18-inch.
Nke abụọ, i kwesịrị iburu nke ahụ n'uche Maka inch ọ bụla nke ihuenyo ị na-abawanye, ịdị arọ nke laptọọpụ ga-abawanye site na 0.45 kilos. N'ezie, enwere ihe ndị ọzọ, enwere ụdị ọkụ na nke dị nro na-emebi usoro a. Ma eleghị anya, ịchọrọ ihuenyo kachasị nkọ na nke kachasị na ahịa, mana ị dị njikere iburu ya n'akpa gị?
Kedu atụmatụ ị kwesịrị ịchọ?
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ngwa teknụzụ, laptọọpụ na-enwekarị ọtụtụ atụmatụ nke ị nwere ike ịchọrọ ma ọ bụ enweghị ike na ndabara. Atụmatụ ndị e depụtara n'okpuru bụ ihe ndị a ga-enwerịrị, ndị ị kwesịrị ịchọ mgbe ịzụrụ laptọọpụ gị.
USB 3.0- Nke a bụ ọkọlọtọ kachasị ọhụrụ na teknụzụ mbufe data USB. Jide n'aka na laptọọpụ gị nwere opekata mpe otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri ndị a ka ịnyefe faịlụ n'etiti laptọọpụ gị na, dịka ọmụmaatụ, draịvụ USB 3.0 na-adị ngwa ngwa.
802.11ac Wi-Fi- Ruo ugbu a 802.11n bụ njikọ ịntanetị ikuku kachasị ọsọ, mana n'afọ gara aga 802.11ac routers apụtala. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji laptọọpụ gị na-ekiri vidiyo na-enuba ma ọ bụ budata ọnụ ọgụgụ buru ibu nke faịlụ na ọdịnaya, ị kwesịrị ịtụle nke ọma ịhọrọ ụdị nwere ụdị njikọ Wi-Fi ahụ.
Onye na-agụ SD- Site na mgbasawanye nke igwefoto Smartphone maka ịse foto, ọtụtụ ndị na-emepụta laptọọpụ amalitela ikpochapụ njirimara a na ụdị ha, agbanyeghị, ọ bụrụ na ị bụ onye na-anụ ọkụ n'obi foto, ị nwere ike na-atụ uche onye na-agụ kaadị SD.
Ihu mmetụ akaỌ bụ ezie na uru nke ihuenyo mmetụ na laptọọpụ bụ ihe a na-enyo enyo maka ugbu a, anyị amaghị ihe ọdịnihu ga-eweta. Otú ọ dị, ọ bụ njirimara nke nwere ike ime ka nhazi ahụ dịkwuo ọnụ, ya mere nyochaa nke ọma ma ọ bụrụ na ọ ga-aba uru tupu ị kpebie.
Ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị tupu ịzụrụ
Tupu ị na-agba ọsọ ịzụta laptọọpụ kacha mma, ị kwesịrị ịjụ onwe gị ajụjụ ndị a. Ha ga-enyere gị aka ikpebi ụdị laptọọpụ kacha mma maka gị.
Kedu ihe ị ga-eji kọmpụta maka ya?
Ọ bụrụ na ị ga-eji ya karịa ihe niile na-achọgharị ịntanetị, lelee vidiyo ndị na-ebugharị ma soro ezinụlọ gị na-akpọ vidiyo site n'oge ruo n'oge, n'ezie ị ga-enwe kọmputa zuru oke maka iji ya eme ihe n'ozuzu ma ọ bụ nke akụ na ụba. Ọ na-amasị gị igwu egwu? Ebe ị nwere azịza. Ị na-akwagharị nke ukwuu ma ịchọrọ laptọọpụ dị gịrịgịrị ma dị mfe, gbalịa Ultrabook. Ịza ajụjụ a ga-egosi gị mgbe niile n'ụzọ ziri ezi.
Kedu ihe na-amasị gị maka imewe?
Enwere ụdị kọmpụta niile, ụdị, ụdị na nha - ọ bụghị ịkọ ọkwa nke agba ma ọ bụ ihe. Ọ bụrụ na ị na-akwa emo na arụrụ arụ arụrụ arụ nke laptọọpụ ị na-ahụ gburugburu gị, ikekwe ị chọrọ naanị kọmputa nwere ihe mkpuchi aluminom, ma ọ bụ opekata mpe rọba dị nro. Ma kpachara anya, imewe na-abụkarị ọnụ.
Ego ole ka ị nwere ike ma ọ bụ ị dị njikere imefu?
N'ikpeazụ, nke a kwesịrị ịbụ isi barometer gị mgbe ị na-ekpebi nke ị ga-azụta laptọọpụ, ị gaghị emefu ihe karịrị ị nwere ike. Ego mmefu gị ga-ekpebi ụdị kọmpụta ị zụrụ.
Gịnị ka anyị ji kpọrọ ihe?
O nwere ike ịbụ na ị ghọtaghị ya, mana laptọọpụ ahụ anọwo na anyị ruo afọ 30 na-enweghị atụ, ọ bụ ezie na n'oge mbụ ọ dị ntakịrị karịa ụdị typewriter na-adịghị mma. Ruo ọtụtụ iri afọ, kọmpụta desktọpụ ọdịnala nyere ike ịgbakọ karịa, ikike nchekwa ka ukwuu, yana ihe nleba anya ka mma na ọnụ ala dị ala. N'etiti XNUMXs, ọ bụ ihe nkịtị inwe kọmpụta desktọpụ, ma ụfọdụ ezinụlọ malitere ịhụ uru dị n'inwe laptọọpụ.
Ka oge na-aga, ịntanetị esitela na modem ọkpụkpọ oku gaa na ndị na-anya ikuku ikuku nke anyị nwere ugbu a yana, n'otu aka ahụ, Laptọọpụ na-akawanye mma iji gboo mkpa nke ndị ọrụ chọrọ iji kọmputa ha na-ebugharị. Ozugbo ngwa maka ndị ọchụnta ego, ndị na-akụ akụ na ndị agha, taa ọ ghọrọ ngwá ọrụ dị mkpa maka onye ọ bụla.
Ebe ọ bụ obere uru nke laptọọpụ, mgbe ị na-atụle kọmpụta nke ị ga-azụta, ị kwesịrị ị na-eleba anya nke ọma na nha ya na ịdị arọ ya., na-echefughị ​​ya processor na ikike ebe nchekwa ya. Ọ bụ ezie na laptọọpụ ọgbara ọhụrụ anaghị aba kilogram 9 dị ka nke ochie, ị ka nwere ike ịhụ ọdịiche dị n'etiti ụdị 2.72 kg na nke 1.84. Ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ ma ị na-eme atụmatụ iburu laptọọpụ gị na klaasị, ị ga-ebufe ya na akpa ma ọ bụ akpa ma ị ga-aghọta n'ezie na ọ bụ obere ihe nlereanya. Ma, n'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị bụ onye injinia ụda na ị na-edekọ egwu egwu egwu egwu, ihe ị ga-ajụ kọmputa gị bụ ka ọ dị ike dị ka o kwere mee.
Enwere ọtụtụ ụdị kọmpụta dị iche iche. Ị nwere ike imefu narị euro ole na ole na laptọọpụ bụ isi ma ọ bụ ọtụtụ puku na laptọọpụ egwuregwu dị elu. Na ụfọdụ ị nwere ike ịnyagharị na ịntanetị wee dee ozi ịntanetị, ebe ndị ọzọ na-enwe ike ịme vidiyo na mmemme ndezi foto n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ụdị laptọọpụ ị na-ahọrọ kwesịrị ikwekọ na ọrụ ndị ị na-eme atụmatụ ime ya. Ị chọrọ ka ọ rụọ ọrụ? Ị chọrọ ikiri ihe nkiri ma ọ bụ ihe ngosi TV kacha amasị gị na ya? Ị bụ onye okike ka ọ bụ egwuregwu vidiyo na-amasị gị? Na ntụnyere laptọọpụ a, anyị enyochala ụdị kachasị mma na ahịa. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga omimi, ị nwere ike ịgụ akụkọ anyị na laptọọpụ.
Kedu laptọọpụ kacha mma na ntụnyere a?
Azịza nke ajụjụ a adịghị mfe ma ọ nweghị ihe jikọrọ ya na laptọọpụ ndị anyị tinyere na tebụl anyị. Laptọọpụ kacha mma bụ nke na-egbo mkpa ndị ị na-achọ na nke na-ekwesịghị ikwekọ na nke onye ọzọ.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike na-achọ laptọọpụ kacha dị mfe n'ahịa iji soro ya gaa ebe niile, onye ọrụ ọzọ nwere ike na-achọ nke ọzọ.
N'ihi nke a, na ntụnyere laptọọpụ anyị, anyị agbalịwo izute mkpa nke ndị niile na-ege ntị, na-akụ nzọ na ihe nlereanya kachasị mma na akụkụ nke ọ bụla n'ihe metụtara ọnụ ahịa ya dị mma.
Ọ bụrụ na ịmaghị kọmpụta ị ga-azụta, hapụ anyị okwu, anyị ga-enyere gị aka ịhọrọ nke ga-adabara gị mkpa.
Laptọọpụ kacha mma maka gị ga-adabere kpamkpam n'ihe mkpa gị dị, nke ihe ị ga-eji ya. Ọ bụ n'ihi nke a ka edepụtara ndepụta ahụ site na ọnụahịa ọ bụghị site na "mma".
Ọ bụrụ na ị na-achọ laptọọpụ ị ga-eji oge ụfọdụ (dị ka ịlele email gị, sọfụ na weebụ, melite netwọk mmekọrịta gị, dezie foto, lelee Netflix ma ọ bụ jiri Microsoft Office ma ọ bụ Google Docs rụọ ụfọdụ ọrụ gị, echegbula onwe gị na Chromebooks. ), Ana m akwado nke ukwuu ka ị tụlee akwụkwọ Chrome. Lee ndị nọ n'elu nke ndu a. Ọ bụrụ na ọbụlagodi nke ahụ, ị ​​na-ekwusi ike ịzụrụ laptọọpụ Windows, ma ọ bụ na ịchọrọ ihe dị ike karị, ị nwere ike ịhọrọ otu n'ime kọmputa ndị anyị tụrụ aro na mbido.
N'otu isiokwu a, ị ga-ahụ ndị nwere uru kacha mma maka ego. Ọzọkwa ọ bụrụ na ị na-ele ntakịrị gburugburu weebụ site na iji igodo igodo na ndị ọzọ ị ga-ahụ na anyị nwekwara ntụnyere na isiokwu ndị ọzọ akọwapụtara dabere na ụdị laptọọpụ ịchọrọ ịzụta. Ị nwere ike ịchọ ịhụ laptọọpụ egwuregwu kacha mma (maka egwuregwu), ma ọ bụ laptọọpụ kacha mma maka ọrụ, wdg.
Dị ka ị na-ahụ site na listi ahụ, a ga m edobere gị anya kpamkpam. Laptọọpụ niile ị ga-ahụ n'okpuru bụ kọmputa Windows. Na, iji bụrụ eziokwu, agbakwunyela m ụdị Windows nke m kpọrọ asị kacha nta. Ọ bụghị na laptọọpụ Windows dị njọ, mana na m na-ejikarị Chromebook nke a pụrụ iji mee otu ọrụ na, n'ozuzu, ha dị ọnụ ala (dị ka ị hụla). Ọ na-aga n'ekwughị na Apple Macbooks enweghị ebe na ntuziaka a 🙂
1 Laptọọpụ dị ọnụ ala kacha mma
1.1 Azụmahịa taa na laptọọpụ dị ọnụ ala
1.2 Ihe Ntụkọ
1.2.1 Laptọọpụ dị ka ọnụ ahịa si dị
1.2.2 Laptọọpụ site na processor
1.2.3 Laptọọpụ n'ụdị
1.2.4 Laptọọpụ site na ika
1.2.5 Laptọọpụ dị ka ihuenyo si dị
1.2.6 Laptọọpụ dịka ojiji ịchọrọ inye ya
1.3 Laptọọpụ kacha mma dị ọnụ ala nke 2021
1.3.1 Akwụkwọ akụkọ CHUWI
1.4 Laptọọpụ kacha mma dị ọnụ ala dịka ojiji ha siri dị
1.5 Ndụmọdụ tupu ịzụrụ
1.6 Ntụle laptọọpụ: nsonaazụ ikpeazụ
1.7 Ụdị nke Laptọọpụ
1.7.2 Laptọọpụ maka egwuregwu
1.7.3 Laptọọpụ maka ụmụ akwụkwọ na ọrụ
1.7.4 Ụlọ ọrụ
1.7.5 Laptọọpụ abụọ na otu (ngwakọ)
1.7.6 Laptọọpụ egwuregwu
1.7.7 Laptọọpụ ebumnuche izugbe
1.7.9 Akwụkwọ ntanetị
1.8 Kamma obere ka ọ bụ nnukwu?
1.9 Kedu atụmatụ ị kwesịrị ịchọ?
1.10 Ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị tupu ịzụrụ
1.10.1 Kedu ihe ị ga-eji kọmpụta maka ya?
1.10.2 Kedu ihe na-amasị gị maka imewe?
1.10.3 Ego ole ka ị nwere ike ma ọ bụ ị dị njikere imefu?
1.11 Gịnị ka anyị ji kpọrọ ihe?
1.12 Kedu laptọọpụ kacha mma na ntụnyere a?
1.13 Nkwubi okwu ikpeazụ